Uur maku qaadi kartaa dhunkashada? – Tips for refugees
Uur maku qaadi kartaa dhunkashada?
Maya, uur kuma qaadaysid dhunkashada!
Kaliya waxaad uur qaadi kartaa marka unugyada minadu gasho gudaha ama aad ugu dhowaato xubinkaaga taranka.
Waxaa laga wadaa marka aad galmo samayso.
Xitaa haddii uu xubinka taranka ninku yahay mid kaliya waxyar uun gudaha ugu jira xubinkaaga taranka.
Unugyada manida waxay kasoo baxayaan xubinka taranka ninka.
Unugyada manidu waxay bacrimin karaan unugyada ukunta haweenayda.
Sidoo kale waxaad uur qaadi kartaa inta lagu guda jiro mudada caadadaada!
Haddii aadan doonaynin in aad uur qaadid, waa in aad marwalba isticmaashid waxyaabo kaa ilaaliya uurka.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo uurka looga hortagi karo.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad kusaabsan noocyada ka hortaga uurka dhakhtarka ama xarun la talin.
Waxaad ka iibsan kartaa kondomyada dukaamada waawayn iyo farmashiyaasha.
Waa kuwo ammaan ah waxayna kaa ilaaliyaan cudurada.
Kaniiniga, gariirada uurka lagu celiyo iyo faraantiga xubinka taranka la geliyo waa noocyo kamid ah ka hortaga uurka kuwaas oo isticmaala hormoono.
Waa in uu dhakhtar soo qoro.
Xaaladaha “deg-dega ah” waxaad kasoo iibsan kartaa “kaniiniga subaxda kadib” farmashiyaha.
Xaalada “deg-dega ah” waa marka aadan isticmaalin wax uurka celiya ama marka uu dhacay xaalada kedis ah oo waxyaabaha uurka celiya ah.
“Kaniiniga subaxda kadib” waa in lagu qaato gudaha seddex maalmood oo laga joogo marka la sameeyay galmada aan ilaalada lahayn.
Text: pro familia München e.V.
Posted on December 23, 2016 January 12, 2017 Author editorialteamCategories Pregnancy - Schwangerschaft
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir. Jirkayga guud ahaan wuu isbedelayaa. Midaasi ma tahay mid caadi ah?
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir ah gurigana waxay ahayd mid caadi ka ah in wiilashu ay dhibaan oona taabtaan haweenka. Hadda halkana waa sidii oo kale. Anigu waan xishoonayaa ama waxaan dareemayaa ceeb. Qofkee i caawin kara?